Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » udliwano » Ixesha elizayo le-LATAM Airlines ngokwe-CEO uPeter Cerda » Page 2
Kwaye ngokuqinisekileyo, le yimizekelo nje yokuba sisondele kangakanani kuluntu lwethu, koorhulumente bethu and [inaudible 00:09:53] kuwo wonke ummandla we… Asikufumani oku kumaphephandaba, ishishini alifumani olu hlobo lokubonakala, ukuba wena yonke imihla, inqwelo moya yakho ihambisa izixhobo zonyango, ihambisa abantu benkonzo ukuba bancede. Kwaye ngoku uphethe isitofu sokugonya. Njengomzi mveliso, ngaba kufuneka sizenzele ngakumbi?
Ndiyathetha, ewe iyanceda. Kodwa ungazithatha ezi ndlela zimbini. Ndicinga ukuba ukubaluleka kweshishini leenqwelo moya kummandla kugxininisiwe, ngokuqinisekileyo luluntu ngokubanzi. Ndicinga ukuba sinokwenza ngaphezulu. Andiqondi ukuba kufanelekile ukuba sisebenzise ukunceda ubhubhane njengeyona ndlela yokwenza oko. Ndicinga ukuba indima yethu, ukuba lilungu lale mibutho, kukunceda. Singaba sisitshixo esiphantsi kuloo nto. Ndiziva ndizingca kakhulu, kwaye umbutho wam uziva unelunda ngokunceda. Kwaye andicingi ukuba sidinga naluphi na uhlobo lokunconywa ngokwenza oko. Sinemiceli mngeni emikhulu ukuya phambili, kwaye ndicinga ukuba sinokubakho okungakholelekiyo kokukhula kwingingqi. Kodwa okwangoku, kwaye njengoko ubhubhane uhamba, ndonwabile ukuqinisekisa ukuba sinokwenza konke okusemandleni ethu ukunceda apha. Kwaye ukuba senza oko ngokungaziwayo, ndiyaphila.
Masitshintshe iigiya siye emva kweengxaki okanye siqale ngokutsha. Ubona ntoni, ngokusekele kumava esiye sanalo kulo nyaka uphelileyo, ngaba uzibona utshintsho olusisigxina kwindlela abahambi abaya kubhukisha ngayo amava abo kunye noko bakulindeleyo kumava okuhamba ukuya phambili?
Lowo ngumbuzo olungileyo. Kwaye kunjalo, ndiyaqikelela, kunzima ukuba ndixele kwangaphambili ngokuchanekileyo okuza kwenzeka. Ndicinga ukuba ngokuqinisekileyo ukuzilawula ngokwamava endiza kuya kukhula. Ndicinga ukuba abantu baya kuba nomdla ngakumbi ekuqinisekiseni ukuba banolawulo olupheleleyo lwexesha labo kunye namava abo okubhabha de bangene kwinqwelomoya. Kwaye ndiyakholelwa ngendlela yokuba ukuba iinqwelomoya zinika olo hlobo lwenkonzo ziya kuba nabathengi abonwabileyo.
Ewe ewe, ndicinga ukuba [inaudible 00:11:57] ukukhawulezisa kunye nokuguqula izinto kuya kuba yinto ephambili kwaye kubalulekile. Ndicinga ukuba amanye amanyathelo okhuseleko athathiweyo ngeli xesha azakuhlala, ubuncinci azakuhlala okwethutyana. Ndicinga ukuba ikwasivumela ukuba sicinge ngokuhoya abakhweli bethu ngeendlela ezahlukeneyo zokuba namava amahle endiza. Kwaye kufuneka sisebenzise loo nto. Kodwa ngaphandle kwalonto, andiqinisekanga ukuba iya kutshintsha ngokusisiseko. Mhlawumbi siza kubona utshintsho olukhulu kubume beshishini ukuya phambili. Kodwa into endiyibonayo, into endiyivayo kukuba, ndiyathetha, abantu bafuna nje ukukhwela inqwelomoya ngokukhawuleza kangangoko banako, ngokukhawuleza kangangoko banako. Kwaye ndicinga ukuba sonke silinde loo mzuzu ukuba wenzeke.
Ngaba ucinga ukuba siza kuba neenqwelomoya ezincinci kummandla? Ngaba ucinga ukuba eli lithuba lokudityaniswa ngakumbi, kwaye ezinye iinqwelomoya azizukukwazi ukoyisa imiceli mngeni emikhulu yezezimali abaye banayo kunyaka ophelileyo, kwaye yintoni esaza kuza kule nxalenye yokuqala yonyaka?
Yenza nje izibalo ezilula. Kwaye ndicinga ukuba kulula ukuqonda ukuba kuyakubakho utshintsho olukhulu kwimizi-mveliso kule minyaka ilandelayo. Umzi-mveliso unamatyala angama-70 okanye angama-60% eengeniso zabo phambi kwengxaki. Namhlanje ayisiyiyo kuphela imboni iyonke ekufuneka ifumene i-200 yezigidigidi zeedola kunye namatyala. Kodwa ukubuyela kwimeko yesiqhelo kuza kuhamba kancinci, kwaye siza kuba ne-200% yamatyala kwiingeniso, kuba iinqwelomoya ezingakhange zizise kwinkqubo yohlengahlengiso njengathi. Kwaye oko, andicingi ukuba kuzinzile. Le nto iza kuchetywa njani, andazi. Kodwa ndiyakholelwa ukuba siza kubona okwethutyana ukuseta okubalulekileyo kwindlela elenziwa ngayo eli shishini namhlanje. Izibalo nje azidibanisi ukuba awuyicingi loo nto, ubuncinci kwiminyaka elandelayo.
Ke, sithethile kancinci ngorhulumente, sathetha ngokudityaniswa. Makhe ndikunike amanani ambalwa engingqi yethu. Ixesha lokugqibela lo mmandla wawunabantu abamnyama, Latin American abathwali, wabuyela ngo-2017. Apho ishishini ngokudibeneyo labathwali baseLatin American lenze malunga ne- $ 500 yezigidi. Ukusukela ngoko, qho ngonyaka, siphulukene nemali kule nxalenye yehlabathi. Ngokucacileyo, kulo nyaka uphelileyo, i-5 yezigidigidi. Kulo nyaka, sinethemba lokuyihlisa iye kuthi xhaxhe malunga ne-3.3 yezigidigidi zelahleko. Le yindawo enzima. Uneenqwelo moya ezintle kulo mmandla, unxibelelwano olululo. I-Pre-COVID, wena kunye ne- [inaudible 00:14:38] bekhula. Besidibene ngcono kwiLatin American kunanini na ngaphambili. Kodwa sisaphulukana nemali. Yintoni ekufuneka iguqulwe ngokusisiseko ukuze ummandla wethu ukhuphisane ngakumbi, njengakwezinye iingingqi kwihlabathi liphela? Kwaye yintoni ekufuneka yenziwe ngoorhulumente ngokwahlukileyo okanye ukunceda ngaloo ndlela?
Ndiyathetha, lo mmandla unamandla amakhulu okukhula. Iindiza ngomgibeli apha zezesine okanye zesihlanu zento oyibonayo kuqoqosho oluphucukileyo. Ngeejografi ezinkulu, kunzima ukudibanisa ngenxa yobungakanani, ngenxa yomgama, ngenxa yeemeko nje. Ke, andithandabuzi ukuba ishishini leenqwelo moya eMazantsi eMelika liya kuzama njengoko sisiya phambili. Ukutsho oko nangona kunjalo kuya kuba namaxesha anzima.
Kodwa ndingathanda ukugxila ngakumbi kwi-LATAM, ukuba uyandibuza, kungcono kushishino, kuba andifuni kuthetha nabanye abantu. Ekupheleni kosuku, lo ibingumzuzu onomdla kakhulu kwiLATAM. Ngokunokwenzeka esona sifundo sibaluleke kakhulu esisifumene kule ntlekele kukuba sikwazile ukubeka iingcinga zethu, iinkolelo zethu, iiparadigms zethu phambi kwethu sazivavanya. Jonga ukuba zeziphi kwaye zifuna ukuguqulwa.
Kwaye kuyamangalisa ukubona indlela umbutho oqonde ngayo ukuba kukho enye indlela eyahlukileyo malunga nokuhamba neli shishini. Okanye malunga nendlela esizenza lula ngayo ngotshintsho, amava endiza kubathengi bethu. Siba nempumelelo ngakumbi. Siya siba nenkathalo ngakumbi kuluntu kunye nendalo iphela. Kwaye yinto encinci, kodwa le ntlekele ngokuqinisekileyo iya kusivumela ukuba somelele ngakumbi njengeLATAM kunaphambi kwengxaki. Ndiqinisekile kakhulu malunga nenkampani yethu. Kwaye njengoko sihamba ngenkqubo yesahluko se-11, imeko enzima ukuba ibe yiyo. Isahluko ngokwaso notshintsho esenzayo lundenza ndizive ndinethemba ngekamva le-LATAMS kule minyaka imbalwa izayo.
Kwaye xa sithetha ngekamva kunye nesahluko 11, kutheni isigqibo? Yintoni eyakutyhalela kwelo nqanaba ukuba nobabini nakholelwa ngelo xesha, leyo yayiyeyona nto ibalulekileyo ukuze, ndicinga ukuba, zibeke njengenqwelomoya kwinqwelo moya, xa siphuma kwintlekele?
Ndicinga ukuba xa saqonda ukuba kuyacaca kakhulu kuthi ukuba asizukufumana uncedo lukarhulumente. Okanye olo ncedo lukarhulumente luya kuza nemeko yokuhlengahlengiswa kwethu. Kwacaca mhlophe ukuba singathatha ixesha elide okanye elifutshane, kodwa kuya kufuneka sizibeke kwimeko yokuyakha ngokutsha inkampani, njengoko uninzi lunjalo. Kwaye ezingakhange, uninzi lwazo kungenxa yokuba ziye zancedwa ngurhulumente. Isisigqibo esona sinzima esithe senziwa yibhodi okanye yinkampani. Njengoko uyazi, usapho lweCueto lube ngabanini zabelo kule nkampani kangangeminyaka engama-25 kwaye bajongana nesigqibo sokuphulukana nayo yonke into. Kwaye ndiyachukumiseka kukuzithemba kwabo kule mibutho. Kwaye emva kokujula, bagqibe kwelokuba baphinde batyale imali kwinkampani kwaye babe ngababolekisi beLATAM.
Njengoko ndiyibona ngoku, ngokuqinisekileyo kwinkampani, eli iya kuba lithuba elihle. Ukuhlengahlengiswa kwakhona kwisahluko kuyasivumela ukuba sincike, sisebenze ngakumbi, kwaye siya kuba nephepha lomncono olomeleleyo kunelo sasinalo xa sasingena kwinkqubo. Ke, ndiziva ndilunge kakhulu malunga nokuba simi phi kwaye kufuneka senze ntoni. Kulusizi ukuba kuye kwafuneka sithathe esi sigqibo. Kodwa ndiqinisekile ukuba kwinkampani, oku kuya kuba kakhulu, kulunge kakhulu ngexesha.